Fahatakarana ny datin'ny famoahana / datin'ny lany andro amin'ny e-visa karana
Fantaro ny daty manan-danja amin'ny e-Visa karanao na Visa Indiana an-tserasera
Misy daty manan-danja 3 tokony ho fantatrao momba ny e-Visa karana anao izay noraisinao tamin'ny alàlan'ny mailaka.
Datin'ny famoahana amin'ny e-Visa: Ity no daty namoahan'ny Manampahefana misahana ny fifindra-monina Indiana ny e-Visa na Visa an-tserasera Visa.
Daty nanapahana amin'ny e-Visa: Ity no daty farany tsy maintsy idiran'ny tompona e-Visa karana miditra any India.
Andro farany fijanonana any India: Ny andro farany izay tsy ahafahanao mijanona ao India dia tsy voalaza mazava momba ny e-Visa any India anao. Ny andro farany dia miankina amin'ny karazana visa anananao sy ny daty nidiranao tao India.
Inona no dikan'ny Datin'ny fahataperan'ny ETA amin'ny e-Visa any India (na Visa any India amin'ny Internet)
Ny datin'ny fahataperan'ny ETA dia miteraka fikorontanana kely ho an'ireo mpizahatany mankany India.
Visa 30 e-Tourista mandritra ny XNUMX andro
Raha nangataka visa 30 mpizahatany India ianao dia tokony hiditra any India alohan'ny "Datin'ny fahataperan'ny ETA".
Ny e-Visa 30 (telopolo) andro dia ahafahanao mijanona ao India mandritra ny 30 andro misesy manomboka ny daty nidiranao. Eritrereto hoe ny datin'ny faran'ny daty voalaza ao amin'ny e-Visa indianao dia ny 8 Janoary 2021. Midika izany fa tsy maintsy miditra any India ianao alohan'ny 8 Janoary 2021. Tsy midika akory izany hoe mila miala any India ianao alohan'ny na amin'ny 8 Janoary. Ohatra, raha miditra any India ianao amin'ny 1 Janoary 2021, dia afaka mijanona hatramin'ny 30 Janoary 2021. Toy izany koa raha miditra any India ianao amin'ny 5 Janoary, dia afaka mijanona any India hatramin'ny 4 feb.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny daty farany fijanonana any India dia 30 andro aorian'ny nidirana ao India.
Nasongadiny tamina taratasy sahy mena tao amin'ny e-Visa indianinao:
"Ny vanimpotoana Visa Validity e-turista dia 30 andro manomboka amin'ny daty voalohany nahatongavany tany India."
e-Business Visa, Visa 1 e-Tourista 5 taona, Visa e-Tourista XNUMX taona ary Visa e-Medical
Fa ny Business e-Visa ho an'i India, 1 taona / 5 taona Ilay e-Visa mpizahatany ho any India ary E-Visa ara-pitsaboana ho an'ny India, ny daty farany fijanonana dia mitovy amin'ny Datin'ny fahataperan'ny ETA voalaza ao amin'ny Visa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, tsy toy ny Visa mandritra ny 30 andro ny Visa dia tsy miankina amin'ny datin'ny fidirana ao India. Ireo mpitsidika amin'ny e-visa karana voalaza etsy ambony dia tsy afaka mijanona mihoatra io daty io.
Averina indray fa ity fampahalalana ity dia voatonona amin'ny taratasy sahy mena ao amin'ny Visa. Toy ny ohatra amin'ny Visa amin'ny e-Business dia 365 andro na 1 taona izany.
"Ny e-Visa Validity dia 365 andro manomboka amin'ny fotoana namoahana ity ETA ity."
Raha fintinina, ho an'ny Visa e-Medical, Visa e-Business, Visa e-Tourista 1 taona, Visa e-Tourista 5 taona, ny daty farany fijanonana any India dia mitovy amin'ny 'Datin'ny faran'ny ETA'.
Na izany aza, mandritra ny Visa 30 e-Tourista mandritra ny 30 andro, ny 'Datin'ny fahataperan'ny ETA' dia tsy datin'ny daty farany fijanonana any India fa io no daty farany nidirana tao India. Ny daty farany fijanonana dia XNUMX andro manomboka amin'ny andro nidirana ao India.
Raha mikasa ny hanao fangatahana visa ho an'ny mpizahatany (30 andro na 1 taona na 5 taona) ianao, dia alao antoka fa ny fialam-boly ataonao dia ny fialam-boly na fitsidihana fandaharana ataon'ny namana na fianakaviana na yoga. Raha atao teny hafa, ny visa fizahan-tany dia tsy mitombina amin'ny fitsangatsanganana any India. Raha ny antony lehibe hahatongavanao any India dia voajanahary ara-barotra, dia aleo mangataka visa orinasa. Hamarino tsara fa efa nanamarina ny fahazoana mandray ny visa any India.